For Those Who Are In Love – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖတ်မိတာလေးတွေကို ပြန်ပြောပြချင်တယ်။
ပထမဆုံးကတော့ အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ ကြံတဲ့အခါ ရတာယူမယ့်အစား လိုချင်တာကို မရရအောင် စောင့်တာ အကောင်းဆုံးဆိုတာပါပဲ။
ယထာဘူတကျကျ ပြန်စဉ်းစားရအောင်နော်…။ ရတာယူတဲ့အခါကျတော့ တစ်ဖက်သားရဲ့ အနာအဆာတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်သိသာ နေတတ်တယ်။ သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ဖို့လည်း ခက်နေတတ်တယ်။ လိုချင်တာကို ရတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ့အနာအဆာတွေ၊ ချို့ယွင်းချက်တွေကို မေတ္တာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ခွင့်လွှတ် ကျော်လွှားသွားနိုင်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရတာယူမယ့်အစား လိုချင်တာကို ရတဲ့အထိ စောင့်တာ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့စကားဟာ မမှားတန်ကောင်းပါဘူး၊ နော့…။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ကိုယ့်အနားမှာ ဝဲနေသူအစား ကိုယ်မေတ္တာရှိတဲ့ သူကို ရအောင် စောင့်ယူတာလည်း အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။
ဒါလည်း မမှားတန်ဘူး။ ကိုယ်က မေတ္တာ ရှိနေရင် သဒ္ဓါတာတွေ၊ ကြည်ဖြူတာတွေက အလိုလို ပါလာမှာမို့ သည်အပိုင်းကို အထူး ပြောစရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိတဲ့သူဆိုတာကတော့ မရှောင်သာလို့သာ ပေါင်းချင် ပေါင်းလိုက်ရမယ်၊ ကြည်ဖြူဖို့ကျတော့ ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလူကို စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါသတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းအပေါ်မှာ အချိန်ဖြုန်းလိုက်မယ်ဆို ဘဝဟာ နှမျောစရာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာမို့ပါတဲ့။
ဟုတ်ပါရဲ့…။ မြန်မာစကားမှာလည်း အရှိသားပဲ၊ ရည်းစား တစ်ထောင်၊ လင်ကောင် တစ်ယောက်တဲ့။ ဆိုရိုးစကားဆိုတာ အလကားမှ မဟုတ်တာ။ တစ်ယောက်တည်းကို တွေ့၊ သည်တစ်ယောက်ကိုပဲ ချစ်၊ သည်တစ်ယောက်နဲ့ပဲ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ လူတွေမှာ ရှိတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ပိုင်းဖြတ်ရွေးချယ်ခွင့်တွေ အလိုလို ဆုံးရှုံးကုန်တာပေါ့။ လောကမှာ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားအရာတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်နိုင်မှ အကောင်း အဆိုး ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်တာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ များများ မြင်ဖူး တွေ့ဖူးထားလေ၊ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ပိုများလာလေ၊ ဘဝအတွက်လည်း ပိုရေရာလေပါပဲ။
စတုတ္ထအချက်ကတော့ အာဖရိက စကားပုံလေးတစ်ခုပါ။ လက်မထပ်ခင်မှာ မျက်စိနှစ်လုံးစလုံးကို ဖွင့်ထားပါ၊ လက်ထပ်ပြီးသွားရင် တစ်ဖက်ကို မှိတ်လိုက်ပါတဲ့။
စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယုကတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ချစ်သူကို လရောင်အောက်မှာ ရှာနိုင်တယ်၊ လက်ထပ်ရမယ့်သူကိုကျတော့ နေရောင်အောက်မှာပဲ ရှာသင့်တယ်လို့ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျား၊ မ မခွဲခြားဘဲ အကြံပေးချင်တယ်။ ချစ်သူကို လရောင်အောက်မှာ ရှာလို့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ လက်ထပ်ရမယ့်သူကိုကျတော့ နေရောင်အောက်မှာ မျက်စိနှစ်လုံး စလုံးဖွင့်၊ ပြူးဖြဲပြီး အညာသား နွားဝယ်သလို ချိုကြည့်၊ ခွာကြည့်၊ သားရေကြည့်၊ စရိုက်ကြည့်၊ အလုံးစုံကို သေချာကြည့်ပြီး ရှာ။ အဲ… တွေ့ပြီ၊ သေချာပြီ လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မျက်စိတစ်ဖက်ကို ပြန်မှိတ်ထားလိုက်ပါတော့လို့…။
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြစ်သွားတတ်တာက ကမူးရှူးထိုးနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်တာပဲ။ ရမ္မက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန် ဆန်နေတဲ့ဘဝမှာ အနေကြာလာလို့ ဆောက်တည်ရာ မရတော့တာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မရင့်ကျက်သေးလို့ဖြစ်စေ၊ ပေါ့ဆလို့ဖြစ်စေ၊ တခြားသူတွေက ဖိအားပေးလို့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ဖြစ်စေ မွှန်ထူပြီး သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ရင် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြဆိုနေတဲ့ သတိပေး လက္ခဏာတွေကို မမြင်လောက်အောင် ကန်းနေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မျက်စိ နှစ်လုံးစလုံးကို စုံဖွင့်ထားဖို့ အကြံပေးတာပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့အခါကျ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုပြင်ယူသွားမယ်၊ ကိုယ်တွေ့နေရတဲ့ သူ့အနာအဆာတွေကလည်း သိပ်တော့ အရေးမကြီးလှပါဘူးဆိုတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်အတွေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလှည့်စားသင့်ဘူး။
ဖြစ်တတ်တယ်နော်…။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ…။ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျ၊ ကိုယ်နဲ့ညားတဲ့အခါကျတော့မှ ကိုယ်လိုချင်သလို ပုံသွင်းယူလို့ ရမယ်လို့ ထင်မှတ်မှားတတ်တာ၊ အင်မတန် ဖြစ်တတ်တယ်။
ယောက်ျားလေးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့…၊ ကိုယ်နဲ့ လက်ထပ်မယ့်သူက အနေအထိုင် သိပ်ဣနြေ္ဒမရဘူး၊ ကလက်လွန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သူ့အလှအပကို သိပ်မက်မောနေတယ်၊ သူ့အညုအတာမှာ မွှန်နေတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ညားပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ သူ့အကျင့်ကို ပြင်မှာပါလို့ တွေးပြီး သူနဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်။ အိမ်ထောင်သက် သိပ်မရခင်မှာ တင် အထင်နဲ့အမြင် ပါစင်အောင်လွဲနေပြီဆိုတာ သိလာရချိန်မှာ အားလုံးက လက်လွန်ကုန်ပြီ။
နောက်တစ်ခုက ဒါတွေက သိပ်အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီး စုံလုံးကန်းလိုက်မိတာ။ နှစ်ယောက်တစ်ဘဝ အတူတည်ဆောက်ပြီး မိုးလင်းက မိုးချုပ် မြင်တွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ကာလတောင်တာ ရှည်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ဖက်သားရဲ့ အနာအဆာတွေ၊ အကဲဆတ်တာတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ မတိုက်ဆိုင်တာတွေဟာ ပိုလို့ ပိုလို့ ထင်ရှားလာတတ်စမြဲပါပဲ။
ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ကြံတာနဲ့ နေရောင်အောက်မှာ မျက်စိနှစ်လုံးစလုံး စုံဖွင့်ပြီး စူးစမ်းဖို့ အကြံပေးရတာပါ။
သူနဲ့ပဲ တစ်သက်တာထာဝရ လက်တွဲတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လို့လည်း ပြီးပြီ၊ သူ့ကိုလည်း ကိုယ်က နှစ်နှစ်ကာကာ မေတ္တာရှိတယ်၊ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း အဆင်ပြေစေချင်၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်မကျခင်တုန်းက စုံဖွင့်ထားတဲ့ မျက်စိကို တစ်ဖက် မှိတ်ထားတတ်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်လာပါပြီ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကို အနှောင့်အယှက် အဖြစ်မခံဖို့လည်း လိုပါပြီ။
ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကြားမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ လိုအင်တွေ၊ တန်ဖိုးထားပုံတွေ၊ အိပ်မက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေနဲ့ အရည်အချင်းတွေ မတူကြပါဘူး။
သူက ကိုယ့်ဆီက ကြင်နာမှုကို မျှော်လင့်ထားမယ်၊ ကိုယ်က သူ့ဆီက သာယာမှုကို မျှော်လင့်ထားမယ်ဆိုရင် ဒါ မျှော်လင့်ချက်ချင်း ခြားနားနေတာပေါ့။ သူက ထိခိုက်ခံစားလွယ်တယ်၊ ကိုယ်က အရာရာကို လိုက်ခံစားမနေဘူး၊ ဘာသိဘာသာ နေတတ်တယ်။ အဲဒါ ခံစားချက်ချင်း မတူတာပေါ့။ သူက တာဝန်ကျေချင်တယ်၊ ကိုယ်က အယုယခံချင်တယ်၊ ချွဲချင်၊ နွဲ့ချင်တယ်။ ဒါ လိုအင်တွေ မတူတာပေါ့။
သူ့အတွက် ငွေသည် ပထမ၊ ဂုဏ်သိက္ခာသည် ဒုတိယ၊ အလုပ်သည် တတိယ၊ မိသားစုသည် စတုတ္ထနဲ့ အချစ်က နောက်ဆုံး။ ကိုယ့်အဖို့မှာကတော့ အချစ်က ပထမ၊ မိသားစုက ဒုတိယဖြစ်ပြီး ငွေက နောက်ဆုံး ဖြစ်နေရင် အဲဒါ တန်ဖိုးထားပုံချင်း မတူတာပေါ့။ သူက ခြံဝင်းမြက်ခင်းနဲ့၊ နောက်ဆုံးပေါ် ကားသစ်ကြီးနဲ့ နေချင်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်က အဲဒါတွေ အရေးမကြီးဘူး။ တဲအိုပျက်မှာပဲ နေရနေရ၊ ချမ်းမြေ့သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်လေး တစ်ခုကို တည်ချင်တယ်။ အဲဒါ အိပ်မက်တွေ ခြားနားနေတာပေါ့။ သူက ဒေါသကြီးတယ်၊ ကိုယ်က မျက်ရည်လွယ်တယ်၊ ဒါဆိုရင် အားနည်းချက်တွေ ကွဲနေတာပေါ့။ သူက စေ့စပ်သေချာတယ်၊ ကိုယ်က ထက်မြက်တယ်။ အရည်အချင်းချင်း ခြားနားတဲ့ သဘော။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေချင်ရင်၊ အောင်မြင်ချင်ရင်တော့ သူရော ကိုယ်ရော နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မမေ့သင့်ဘူး။ တစ်ခု ရှိတာပါပဲ၊ သူ့အတွက် ကိုယ်က ခြောက်ပြစ်ကင်း၊ ကိုယ့်အတွက် သူဟာ သဲလဲစင်နေဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး အားထုတ်နိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
အဲသလိုဖြစ်ဖို့အတွက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အကောင်းဆုံးတွေ လုပ်ပေးနိုင်အောင် အပြန်အလှန် ကြိုးစားရတော့မယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေကို တစ်ယောက်က အသိအမှတ်ြုပပေး၊ ချီးကျူးပေးရမယ်၊ ပြီးရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိနှိုင်းနိုင်ရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြိုင်နေမယ်၊ ကျုပ်တုန်းကတော့ ဘယ်ကဲ့သို့၊ ခင်ဗျာ့ကျတော့မှ ဘယ်ချမ်းသာဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပခုံးချင်း ယှဉ်နေမယ်၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် အားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
အိမ်ထောင်ရေးဘဝထဲကို ဘာတွေ သယ်လာသလဲဆိုတာကလည်း အိမ်ထောင်သာယာမှုအတွက် အရေးကြီးပြန်တယ်။
အတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေ၊ မညားခင်တုန်းက သူနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တခြား သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို သယ်လာတာမျိုး၊ အတိတ်က သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားသူတစ်ဦးဦးအတွက်ဖြစ်ဖြစ် နာကျင်ခံစားမှုတွေ သယ်လာတာမျိုး၊ အတိတ်က မယုံကြည်မှုတွေ၊ သံသယတွေကို သယ်လာတာမျိုးတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ အန္တရာယ်တွေပါ။
နောက်တစ်ချက်က ကိုယ့်ကို ချစ်လာအောင် ဇွတ်လုပ်ယူလို့ မရသလို ကိုယ့်နားမှာ အမြဲရှိနေအောင်လည်း အတင်းလုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာကို သတိထားမိဖို့ပါပဲ။
ခြယ်လှယ်တာ၊ ထိန်းချုပ်တာ၊ မနာလိုဝန်တိုတာ၊ လောဘကြီးတာ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာများဟာ တာရှည်ခံမယ့် အိမ်ထောင်ရေးတစ်ရပ်၊ ခိုင်ခံ့မြဲမြံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ရပ်ကို မထူထောင်နိုင်ပါဘူး။
ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ၊ ဂုဏ်အတွက်၊ သာယာမှုအတွက်၊ ဘဝလုံခြုံမှုအတွက် ရည်ရွယ် လက်ထပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒါဟာ ခိုင်ခံ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ရပ် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ခိုင်မာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်ဖို့ အတွက်…
ဟာသဓာတ်ခံလေးတွေ ရှိရမယ်၊ (ဆိုလိုတာက ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲမှာ ရယ်ပွဲ မဖွဲ့နိုင်ဦးတောင် နှစ်ယောက်အတူ ရယ်မော ပျော်ရွှင်နိုင်ရပါမယ်။)
အိမ်အလုပ်တွေကို ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးတတ်ရမယ်၊
(ကလေးတွေ၊ အလုပ်တွေ မပါဘဲ) နှစ်ယောက်တည်း သီးခြား အတူနေတဲ့ အချိန်လေးတွေ ရှိနေတာ၊ ထမင်းလက်ဆုံစားတာလို၊ ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း အတူလုပ်တာလို၊ ပွေ့ပွေ့ပိုက်ပိုက်နေတာလို၊ လက်ချင်းဆုပ်ထားတာလို၊ စာတိုလေးတွေ အပြန်အလှန် ရေးတာလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နေ့စဉ် ထိတွေ့နေတတ်ရမယ်၊
နှစ်ဦးသဘောမျှတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို မျှဝေတတ်ရမယ်၊
မလုံခြုံတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို မဖြစ်စေဘဲ သူ့ဘာသာ သီးခြား ရပ်တည်ခွင့်ပေးတတ်ရမယ်၊
သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေနဲ့ တာဝန်တွေကို သီးခြားပေးထားတတ်ရပါလိမ့်မယ်။
သည်အချက်တွေ မပါဘူးဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ နာကျည်းစရာကောင်းလာမယ်၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလာမယ်၊ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းလာမယ်၊ လျစ်လျူရှုတာတွေ များလာမယ်၊ သစ္စာမဲ့တာတွေ ပေါ်လာမယ်၊ ချစ်ခင် စုံမက်မှု နေရာမှာ နာကျင်မှုက အစားထိုး ဝင်ရောက်လာပါတော့မယ်။
“ကျွန်တော်တို့မှာ အမှတ်ရစရာလေးတွေ ရှိနေသမျှ မနေ့က ဆိုတာလည်း တင်ကျန်ရစ်နေဦးမှာပါ။ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသမျှ နက်ဖြန်တွေကလည်း စောင့်ကြိုနေဦးမှာ။ အဲ… ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေ ရှိနေသမျှ ကနေ့ဟာလည်း လှပနေဦးမှာပါပဲ…”
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာဟာ ခံစားချက်တွေ၊ စုံမက်မှုတွေ၊ စွဲလန်းမှုတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ဦးတောင်မှ တစ်ဖက်သားအပေါ်ဂရုတစိုက်ရှိနေသေးတဲ့ အနေအထားကို ခေါ်တာပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်လုံးချင်း မဆုံမိသည့်တိုင် အချင်းချင်း လက်တွဲပြီး လျှောက်လှမ်းနိုင်သေးတဲ့ အနေအထားကို ခေါ်တာပါ။
ကြိုးစားချင်တဲ့ စိတ်ရှိနေသေးလျက်ကနဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို မဆိုဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ်လုပ်နိုင်နေမှန်း သိလျက်နဲ့လည်း အလွယ်တကူ အလျှော့မပေး၊ အရှုံးမပေးပါနဲ့။ တကယ်လည်း ခွဲနိုင်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မချစ်တော့ဘူးလို့ တစ်ဖက်သားကို လွယ်လွယ် မပြောဖြစ်ပါစေနဲ့။
တကယ်လို့များ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်နေတယ်ဆိုရင် ဖွင့်ပြောလိုက်စမ်းပါဗျာ။ မပြောဖြစ်လိုက်တဲ့ စကားတွေကြောင့် ကြေ မွကုန်ရတဲ့ အသည်းတွေလည်း သည်လောကကြီးမှာ မနည်းဘူးနော…
(၃၁-ဝ၇-ဝ၁ နေ့ထုတ် အတွေးသစ်ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၄၇ မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် ၁၇၅/ ၂၀၀၃ (၂)နဲ့ လက်တွဲဖော်စာအုပ်တိုက်က ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ထုတ်ဝေထားတဲ့ “ထိမ်းမြားပေါင်းဖက် ရန်ဖြစ်လျက်ပင် ချစ်ကြင်နေနည်း” စာအုပ်ထဲက အဖွင့် တစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on7May 2010 Categories Love & Marriage, Reproduction
3 thoughts on “For Those Who Are In Love”
9 May 2010 at 8:00 pm
I like it. thanks for sharing with us
16 May 2010 at 9:25 pm
This is also useful for us… Thanksalot, sayar
4 May 2012 at 5:45 am
ဆရာ့ရဲ့အကြံပေးချက်တွေကတကယ်မှန်ပါတယ်..အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ကလူတွေက ယူပြီးရင် ပြီးပြီ ကြင်ကြင်နာနာ ယုယုယယ ဆက်ဆံဖို့မလိုဘူးဘဲထင်နေကြတာ..လင်မယားနှစ်ယောက်တည်း နေပြီးအချိန်ယူဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်…လက်ချင်းဆုပ်ထားတာတို့ဘာတို့ရှက်ဖို့မလိုပါဘူး….
Previous Previous post: Hanky-Panky
Next Next post: Great fun, huh?